1.ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည် Halibut လုံးလေးများအပါအ ၀ င်ငါးမျိုးစုံအတွက်လုံးလေးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ငါးခူလေးများ, CatCarp တောင့်တင်းသည်, ရောက်ရေချိုငါးလုံး, Hemp လုံးလေးများ, CSL လုံးလေးများ,စသည်တို့.
ဤငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်တိရိစ္ဆာန်ငါးအစာတောင့်များအားအထူးထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရဤရေပေါ်ငါးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ရေပေါ်ငါးအစာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, နွေးထွေးသောငါးအစာကျွေး, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာကျွေး, မွေးမြူရေးအစာ, စသည်တို့. အဆိုပါထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံရှိနိုင်ပါသည်, ထူးခြားတဲ့အရသာ, တိရစ္ဆာန်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစာစားသည့်အလေ့အထကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အာဟာရဓာတ်များပါ ၀ င်သည်. စူပါအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်အလတ်စားနှင့်အကြီးစားအစာကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည် Halibut လုံးလေးများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောငါးအမျိုးမျိုးအတွက်လုံးလေးများထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ငါးခူလေးများ, CatCarp တောင့်တင်းသည်, ရောက်ရေချိုငါးလုံး, Hemp လုံးလေးများ, CSL လုံးလေးများ,စသည်တို့.
ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်တစ်နာရီလျှင် ၃၀၀-၄၀၀ ကီလိုဂရမ်နှုန်းဖြင့်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှု၏ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်. ဤငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းသည်ပြောင်းဖူးမှစီးပွားဖြစ်လုံးလေးများပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ပြောင်း, မြက်ပင်, အစေ့, ပရိုတိန်း, သကာရည်နှင့်အစ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူနောက်ဆုံးလုံးလေးများ, ထူးခြားတဲ့အရသာ, ကြွယ်ဝသောအာဟာရများနှင့်ဒဏ်ငွေ texture,နှင့်ဤမျောငါးအစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံရွှေငါးကဲ့သို့ရေနေနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, အပူပိုင်းဒေသငါး, ငါးခူ, ပုစွန်, ခွေး, ကြောင်နှင့်စသည်တို့. စူပါအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု, မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားအစာကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူအပြည့်အဝလုံးလေးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုလည်းဖောက်သည် '' သတ်သတ်မှတ်မှတ်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရရှိနိုင်ပါသည်.
1. အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, မြင့်မားသောစွမ်းရည်နှင့်အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု.
2. အဆိုပါ modular ဖွဲ့စည်းပုံတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် disassembly များအတွက်အဆင်ပြေသည်, အဆိုပါတင်ပို့ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်လွယ်ကူချောမွေ့.
3. ထိန်းချုပ်ထားသည့် PLC, နှိုးစက်ကိရိယာရရှိနိုင်ပါသည်. စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသည်.
4. နောက်ဆုံးလုံးလေးပုံသဏ္andာန်နှင့်အရွယ်အစားများသည်မှိုကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်. ငါးနှင့်ပုဇွန်အစာတောင့်သည်, ရေထဲတွင် floating အချိန် extrusion ဒီဂရီညှိနှိုင်းမှုအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်.
5. အပြောင်းအလဲနဲ့မြင့်မားသောအပူချိန်ချက်ချင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်, အလွန်အစာကျွေးအတွက်အာဟာရ၏ပြိုကွဲလျှော့ချ, တစ်ချိန်တည်းမှာပရိုတိန်းတိုးတက်လာသည် (ပရိုတိန်း၏ယိုယွင်းမှတဆင့်) နှင့်ဓာတ် (ဓာတ်ငါးပိမှတဆင့်) အစာခြေ, ထုတ်ကုန်များ၏အာခေါင်တိုးတက်စေရန်.
6. အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းရည်ကိုသေချာစေရန်, အထူးဖိအား - တိုးမြှင့်ကိရိယာရှိပါတယ်. အပြင်, လျှပ်စစ်အပူပေးစက်သည်အစာတိုးချဲ့နှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်.
●ကုန်ကြမ်းများအစာတောင့်တွင်တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းနှင့်အပင်ပရိုတင်းပါဝင်သည်. အပင်ပရိုတင်းသည်ပြောင်းဖူးမှလာသည်, ဆန်, ဂျုံ, ပဲပုပ်, မြေပဲကိတ်မုန့်အမှုန့်, စသည်တို့; တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းငါးမုန့်ညက်ကနေဖြစ်ပါတယ်, ပုစွန်မုန့်ညက်, ကဏန်းမုန့်ညက်, လက် - ငါးမုန့်ညက်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏အစာစားခြင်းအလေ့အထအရအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်နိုင်သည်.
●အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်စဉ်များပစ္စည်းကြိတ်, ပစ္စည်းရောစပ်, extruding လုံးလေးများ, လုံးလေးများခြောက်သွေ့, နှင့်တောင့်ထုပ်ပိုး. တစ်ခုလုံး ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် အလွန်အမင်းအလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်.
●ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း 0.06 ရန်5တစ်နာရီကိုတစ်တန်ရနိုင်သည်.